PowerPoint Quiz Onye kere - Mee a Quiz na PowerPoint ma ọ bụ QuizCreator
> Resource> Atụmatụ> Mee a Quiz na PowerPoint, PowerPoint Quiz Onye kere ma ọ bụ QuizCreator
Ime a ajụjụ na ịma aka ndị ọzọ pụrụ ịdị na-akpali. E nwere ọtụtụ ụzọ na i nwere ike ime ka ojiji nke ike a zaa ajụjụ. PowerPoint nwere ike ịbụ a na-enye aka ngwá ọrụ n'ihi na ị na-eme ka ụfọdụ kenkwukorita quizzes. Ọzọkwa, ị pụrụ ike Flash ajụjụ na Flash ajụjụ software. N'ebe a, anyị ga-ahụ otú ike a PowerPoint ajụjụ dị iche iche.
Nkebi nke 1: Mee ka a Quiz na PowerPoint
Nkebi nke 2: Mee ka a Quiz na PowePoint Quiz Onye kere
Nkebi nke 3: Mee ka a Quiz na QuizCreator
Mee ka a Quiz na PowerPoint
Ọtụtụ mmadụ na-arịọ esi mee ka quizzes na PowerPoint. Lee, m na-enye ụzọ abụọ na-eme ka a zaa ajụjụ na PowerPoint.
1 Mụta VBA mmemme na kee ajụjụ na PowerPoint.
2 Mee esịtidem njikọ na buttons n'etiti slides iduzi na-ege ntị N'ihi na peeji ma ọ bụ nzaghachi peeji dabeere na azịza ha. N'ụzọ dị otú a, gị ngosi ga-ele anya dị ka a zaa ajụjụ, na ọ bụ nnọọ mfe ma kensinammuo. Ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ajụjụ na-eme ka n'ime ajụjụ, ọ ga-abụ ihe dị mfe ọrụ.
Ebe a bụ PowerPoint ajụjụ sample (multiple oke):
Lelee nkọwa nke otú ka ndị dị otú a dị mfe quizzes na PowerPoint >>
Mee ka a Quiz na PowerPoint Quiz Onye kere
Na-atọ ndị ọzọ software dị ka Atrixware si PowerPoint Quizmaker, ị nwere ike easiy-eme ka a zaa ajụjụ na anya dị ka a na-kere ke PowerPoint. Ọ na-azọpụta gị oge iji hazie na mmekọrịta dị n'etiti slides. Iji nke a PowerPoint Quizmaker, ị kwesịrị ị na-emeghe PowerPoint mere na omume nwere ike na-arụ ọrụ.
Mee ka a Quiz na QuizCreator
Ndị ụzọ n'elu nwere ike na-na-na multiple oke ajụjụ. N'ihi na ụfọdụ mgbagwoju anya ajụjụ ụdị dị ka kenha, usoro, na-ekpo ọkụ ntụpọ, wdg, ha agaghị aka. Dabara nke ọma, Wondershare QuizCreator dị. Nke a software e mere maka eke gbara ọkpụrụkpụ quizzes. The ruo 9 na-ewu ewu ajụjụ ụdị ga afọ ju ọtụtụ ọrụ 'mkpa. Ọ ukwuu belata ajụjụ e kere eke oge, na mgbanwe na-ekwusara nhọrọ dị ka Flash, exe, okwu / Excel-eme ka ọ dị mfe ịkọrọ n'agbanyeghị online ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị. Ya mere gị na mkpa iji embed ajụjụ gị PowerPoint ngosi nwere eme ka a zaa ajụjụ.
Nkọwa ndị ọzọ banyere esi mee ka a Quiz na QuizCreator